VAOVAO TSARA HO FANTATRA (01/12/11) - rov@higa
VAOVAO TSARA HO FANTATRA (01/12/11)
1 Décembre 2011, 22:52pm
Tsy izy io governemanta io “Sazio ny FAT !”, hoy i Louis Michel
Miantso ny Vondrona Eoropeanina i Louis Michel, hanamafy ny sazy amin’ny FAT ary tsy tokony hakantoavina io governemanta mijoro io.
Miantso ny Vondrona Eoropeanina hanohana ny fanatanterahana ny fihaonana an-tampon’ireo filoha efatra mpitarika ireo firehana politika lehibe eto Madagasikara, hisian’ny tenierana amin’ny fametrahana tetezamita iaraha-mitantana sy andraisan’ny rehetra anjara. Ankoatra izay dia mitaky ny hamoahan’ny FAT fepetra hampisy fitoniana ihany koa izy sy fampitsaharana miaraka amin’ny vava ny antsojay sy fampihorohoroana amin’ny endriny samihafa. Tao anatin’ny taratasy iray pejy, miendrika fanontaniana, nalefany any amin’ny Parlemanta Eoropeanina ny 29 novambra teo, no nanambaran’i Louis Michel, filoha mpiara-mitantana ny Vondrona parlemantera iraisan’i Afrika-Karaiba-Pasifika sy ny Vondrona Eoropeanina, izany. Nitanisa antony maromaro izy nanohanany ny heviny, amin’ny tokony handraisan’ny Parlemanta Eoropeanina ireo fepetra ireo, manoloana ny zava-mitranga amin’ny fanatanterahana ny tondrozotra.
Rehefa nandinika sy namakafaka ny fandehan’ny raharaha i Louis Michel, dia mahatsapa fa tsy tafavoaka ny praiminisitra Omer Beriziky amin’ny fametrahana governemantan’ny firaisam-pirenena, araka ny voatondron’ny tondrozotra voasonia tamin’ny 17 septambra 2011, tokony hamoahana an’i Madagasikara amin’izao krizy diaviny izao. Teo amin’ny fanendrena ny praiminisitra Omer Beriziky dia efa tsy voahaja ny andininy faha-5 amin’ny tondrozotra, hoy i Louis Michel, satria tsy nisy fiaraha-midinika na koa fakan-kevitra nifanaovana tamin’ny ankolafy mpanohitra, nialoha ny fanendrena izay olona nifanarahana ho praiminisitra. Rehefa izay dia tsy mbola voahaja ihany koa ny fifandanjana arak’isa sy ara-politika amin’ny firafitry ny governemanta. Vokany, sady mitanila no tsy iraisana fa mbola taritokana io governemanta mijoro io. Mbola manao tsindry aloka Atoa Andry Rajoelina manery ny hanarahana ny safidiny tamin’ny fananganana ny governemanta, ahafahany mamihina ny fahefana, hoy ity Kaomisera Eoropeanina ity. Manohitra izany toe-javatra mifono tsikombakomba izany ny mpanohitra, hoy i Louis Michel, hany ka tsy mandray anjara amin’ny dingana fampiharana ny tondrozotra hivoahana amin’ny krizy.
Mikasika ny zon’olombelona, manamarika i Louis Michel, amin’ity taratasy nalefany any amin’ny Parlemanta Eoropeanina ity, fa manahy mafy ny Amnesty International amin’ny fihetsik’ireo hery famoretan’ny FAT izay tsy mitsahatra ny manosihosy ny zon’olombelona, toy ny fampijaliana ary koa fisambotsamborana olona ary koa ny fitazonana am-ponja tsy misy antony mazava. Nataon’i Louis Michel vaky bantsilana ihany koa fa tsy arakaraka izay voasoratra ao amin’ny tondrozotra ny zava-mitranga ankehitriny, satria hatramin’izao dia tsy misy tetiandro mazava hahafahan’ireo sesitany politika miverina an-tanindrazana tsy misy fepetra, ary ny loza aza, hoy izy fa mbola misy didy fampisamborana indray mitatao amin’ny filoha Marc Ravalomanana, nefa efa tokony ho natsahatra sy nofoanana avokoa izany.
Noho ireo antony ireo no mahatonga azy mametra-panotaniana amin’ny Parlemanta Eoropeanina, hoe toe-javatra toy izany no mendrika fankatoavana ? Tsy tokony hotohanan’ny Vondrona Eoropeanina ve ny fanatanterahana ny fihaonana an-tampon’ireo filoha efatra mitarika firehana politika lehibe eto Madagasikara, hisian’ny tenierana amin’ny fampijoroana ny tetezamita iraisana ? Tsy tokony hohamafisin’ny Vondrona Eoropeanina ve ny sazin’ny FAT, raha tsy mbola misy ny fepetra hampisy fitoniana eto ?
CST - CT : tsy afa-po ny Ankolafy RAVALOMANANA (+vidéos)
Ny atoandro teo no natolotra tamin’ny fomba ofisialy ireo mpikambana rehetra ao amin’ny Kongresin’ny tetezamita sy ny Filan-kevitra ambonin’ny tetezamita. Ho an’ny Ankolafy RAVALOMANANA manokana dia fantatra fa toerana 30 no azony ao amin’ny Filan-kevitra ambony raha 57 kosa ny ao amin’ny Kongresy. Raha ny filazan’ny Me. Hanitra Razafimanantsoa dia “tsy mahafapo akory ireo isa ireo saingy ny azahoana ny marimaritra iraisana no tena tanjona tamin’ny fifampiresahana nahitana izao vokatra izao”.
Niteraka resa-be eo amin’ny samy mpitolona ity fandrafetana ny listra ho parlemanteran’ny tetezamita ity. Indrindra fa nandeha mafy ny feo fa misy amin’ireo olom-boafidy TIM tsy tazana tao anatin’ny telo taona no nipoitra ankehitriny ary tafiditra ao anatin’izany hatolotra hitondra ny anaran’i Dada izany. Misy ny mieritreritra fa fanaovana zinona ireo rehetra tsy anatin’ny antoko nefa afaka niasa sy niaritra ny mafy izany ka tsy azo ekena. Nitarika savorovoro tao amin’ny foibe teny Belair mihitsy moa ity raharaha ity andro vitsivitsy izao.
Ny hevitrin’ny maro an’isa amin'ny mpitolona dia tsy mbola miala amin’ny laharam-pahamehana dia ny famerenana ny Filoha RAVALOMANANA an-tanindrazana. Izany no mahatonga ny fanehoan-kevitra mirona mankany amin’ny tsy tokony hanaovana izay listra ho parlemantera raha tsy tonga an-tanindrazana ny Filoham-pirenena RAVALOMANANA sy ireo sesitany politika rehetra. Ankoatr’izay dia andrasan’ny maro mafy ny famoahana ireo gadra politika eto an-toerana indrindra fa efa misy Ministra mitondra ny hevitrin’ny Ankolafy RAVALOMANANANA ao anatin’ny governemanta Beriziky.
Fahatongavan’ny Filoha RAVALOMANANA : tompon’andraikitra amin’ny zava-misy izay manakorotana (+vidéos)
Minaonaona mihitsy amin’izao fotoana ny fampihorohoroana ataon’ny mpomba ny FATE mikasika ny fahatongavan’ny Filoha RAVALOMANANA eto an-tanindrazana. Tsy mijanona amin’ny manamboninahitra mitam-basy intsony izany fa dia tonga hatrany amin’ny mpanao politika sy ny sivily mihitsy. Ny AV7 izao dia efa mandrangaranga fa hanakorotana ny fahatongavan’ny Filoha RAVALOMANANA ary hitondra olona an-tapitrisany ho eny amin’ny seranam-piaramanidina amin’izany andro izany. Raha ny lafiny lalàna manokana dia efa « préméditation » io ataon’izy ireo io saingy tsy misy ny mandray fepetra mikasika izany satria ilay jeneraly mpisambotra mahay dia miombon-kevitra amin’ireto mpanani-dapa ireto. Nilaza moa ireto farany fa hanoro-ponenana eny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena manomboka androany hiandry ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA .
Tsy maintsy hody …
« Ny Filoha RAVALOMANANA tsy maintsy hody » hoy ny fanehoan-kevitra rehetra ifampizaran’ny mpiara-mitolona. Izy rahateo tsy mba naman’ny saro-tahotra ka hihemotra amin’ny vava an-tsirambina. Ny fanomanana rehetra efa natao dia azo antoka fa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sady tsy mivaona amin’ny voarakitra anaty tondro zotra. Ny vahoaka ihany koa dia tsy hamela moramora izay manana fikasan-dratsy amin’izany Filoha nofidiny izany ka hamela azy eny an-tanan’ny biby dia. Tsy misy tsy mahalala fa misy fetra ahafahana mampiasa fitaovam-piadiana amin’ny fitandroana ny filaminana anaty ka rehefa dila io isan’olna io dia miondrika ny basy. Tokony ho tsaroana koa anefa fa amin’ny tany Repoblikana dia tomponandraikitra sivily no manome baiko amin’ny fampiasana fitaovam-piadiana sy ny momba ny olona mampiasa izany.
Noho izany indrindra no ampahatsiahivana ny Malagasy tsy vaky volo fa ny Ntaolo no efa nilaza fa « izay be no basy ». Mitaky andraikitra amin’ny mpiara-mitolona rehetra ny hampitombo folo heny na mihoatra ny isan’ny nitsena ny Filoha tamin’ny 19 Febroary teo mba tsy ahafahan’ny ratsy mahazo vahana.
Fikasana hisambotra ny filoha Ravalomanana Mampitandrina ny Emmo-Reg ny vahoakan’ny Magro
“Tsy mampaninona na manana ny didy fampisamborana sy ny basy aza ianareo fa izahay manana ny vahoaka”, hoy i Ignace, solontenan’i Moramanga tonga tetsy amin’ny kianjan’ny Magro omaly.
Fihantsiana ady amin’ny vahoaka Malagasy ny fikasana hisambotra ny filoha Ravalomanana, hoy ihany izy. Raha vonona amin’izany ireo milaza ho manana ny fahefana dia ataovy ny fisamborana raha sahy, hoy ihany izy. Niantso ny praiminisitra Beriziky koa ny tenany mba handray andraikitra satria eo ambany fiadidian’ny praiminisitra ny mpitandro filaminana, hoy ihany ingahy Ignace. Niantso moa ny tenany mba ho avy marobe, avo folo heny mihoatra noho ny tamin’ny 19 febroary 2011 efa nitsenana ny filoha. Tsotra ny an’ireo mpitolona etsy amin’ny Kianjan’ny Finoana dia ny fiverenan’i Marc Ravalomanana an-tanindrazana sy ny fahafahany hilasataka hofidiana ho filoham-pirenena. “Raha sanatria ka noho ny ataonareo no tsy hahatafody ny filoha eto dia rava ny androtr’iny ihany io fanjakana io”, hoy i Guy Maxime Ralaiseheno satria tsy an’i Andry Rajoelina sy ny manodidina azy i Madagasikara fa an’ny Malagasy.
Tetsy andaniny, nitondra fanazavana momba ny tsy hidiran’ny ankolafy Zafy Albert ao anatin’izay rafitra hajoro eo ingahy Camille Mektoub. Tarigetra, hoy izy, ny hiverenan’ny ara-dalàna sy ny hiverenan’ny filoha Ravalomanana. Hatreto aloha dia tsy mbola nisy tanteraka ireo ary ny fidirana ao anatin’izay rafitra eo dia midika ho fampirisihana ny tsy fanarahan-dalàna. “Fahadisoana be vava ny fidirana ao satria isika no asaina tsy manara-dalàna sy mandika ny sori-dalana, tsy hanaja ihany koa ireo raiamandreny mpitarika”, hoy ihany i Camille Mektoub. Ohatra nosinganiny moa amin’ny tsy fanajana ny lalàna ny andininy faha-6, milaza ny tokony hitsinjarana ireo toerana amin’ny rariny sy mitovy.
“Ny zava-misy dia sady tsy rariny no tsy mitovy ny fitsinjarana natao”. Momba ny fikasana hisambotra ny zanaky ny filoha Ravalomanana ka hialokalofan’ity farany any amina masoivoho vahiny iray eto an-drenivohitra dia nambaran’ity solombavambahoakan’i Mananjary teo aloha ity fa izany no “vavolombelona eo anatrehan’izao tontolo izao fa tsy manaja ny sori-dalana ny FAT izay mandady amin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena hahazoana ny fankatoavana iraisam-pirenena”. Nambarany ihany koa fa ho avy tsy ho ela ny andro hahatongavan-dRavalomanana an-tanindrazana. Tsy hitsena fe hitsena fotsiny ihany ireo mpomba azy amin’io fotoana io fa dingana iray hanatanterahana ny TSARA na ny tetezamita tsy misy an’i Andry Rajoelina ary ny fihaonana eo amin’ireo filohana ankolafy izay fotoana izay.
Antsohihy Voasambotra ihany i Jao Jean
Omaly hariva no nosamborin'ny zandary tany Antsohihy i Jao Jean, mpikambana ao amin'ny Filankevitra ambonin’ny tetezamita (CST).
Tao amin'ny hotely Le Relais de la Sofia no nakana azy. Zandary manodidina ny 10 notarihin'ny manamboninahitra lietna iray no nanatanteraka ny asa. Tranga efa tamin'ny volana aprily izao. Voalaza fa voarohirohy noho ny fanolanana zaza tsy ampy taona i Jao Jean. Nisy ny didy fampisamborana navoakan'ny Fitsarana ho azy volana vitsy lasa izay. Tsy nisy sahy nanatanteraka anefa. Tonga tany Antsohihy mihitsy ny GSIS nikasa hisambotra azy saingy tsy tontosa izany noho izy izay voalaza fa tsy hita.
Ny nahavariana anefa dia andro vitsy nialoha io nahatongavan'ny GSIS tany Antsohihy io dia nirehareha tao an-toerana ny tenany niaraka tamina minisitra FAT iray. Nojeren'ireo zandary tao an-toerana fotsiny izy tamin'izany. Andro maro taorian'izay dia niakatra taty an-drenivohitra ny Ben'ny tanàna vitsivitsy avy ao amin'ny faritra Sofia niezaka niaro ity mpikambana ao amin'ny CST ity. Nilaza ny Ben'ny tanànan'Antsohihy Rakotondravony Victor Mikhet fa fanasoketana ataon'ny mpanao politika sasany avy ao amin'ny Faritra Sofia ihany no anton'ity tranga ity fa tsy misy izany fanolanana izany mihitsy. Omaly kosa rehefa voasambotra i Jao Jean dia avy hatrany nentina any Mahajanga. Loharanom-baovao hafa no nahafantarana fa ny marainan'ny omaly ny tenany dia efa nitolo-batana tao amin'ny Fitsarana tao Antsohihy saingy tsy noraisin'ny mpitsara fa nasaina niverina amin'ny fotoana manaraka. Ny hariva anefa dia izao nosamborina izao.